पुस्तक समीक्षा : भारतमा नेपाली ‘भाषा आन्दोलन, इतिहास र उपलब्धि’ - Ratopati
यतिखेर भरतको दार्जिलिङमा नेपाली भाषा आन्दोलन चर्किएको छ । पश्चिम बङ्गाल राज्यकी बङ्गाली मुलकी मुख्य मन्त्री ममता बनर्जीले अनिवार्य रुपमा सबैले बङ्गाली भाषा पढ्नै पर्ने बाध्यकारी नीति लागू गरेपछि भारतका नेपाली भाषीहरु आन्दोलित भएका छन् । संवैधानिक हक प्राप्त गरिसकेको भाषालाई बाइपास गरेर राज्यमा अर्को भाषा अनिवार्य पढनुपर्छ भन्ने कुरा भारतका नेपाली भाषीहरुले मोनका छैनन् । यसैले नेपाली भाषलाई संवैधानिक अधिकार दिलाउन गरेको सङ्घर्षझैँ हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन पनि नेपाली भाषीहरु सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । आन्दोलनले गर्दा यति खेर दार्जिलिङमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले सेना परिचालन गरेर आन्दोलन दाबाउन प्रयास गरिरहेको छ ।
स्मरण रहोस् दुई करोड नेपालीहरुको बसोवास भएको भारतमा नेपाली भाषाले संबिधानमा आठौँ स्थान प्राप्त गरेको छ । लामो सङ्घर्ष र आन्दोलनपछि मात्र सन् २० अगस्त १९९१ मा नेपाली भाषाले आठौँ अनुसूचीअन्तर्गत भारतमा संवैधानिक हक प्राप्त गरेको हो ।
तर नेपाली भाषालाई संवैधानिक हक दिलाउन भारतका विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने नेपाली भाषी भारतीयहरुले कति लामो र कठिन सङ्घर्ष गरेका थिए भन्ने थोरैलाई मात्र थाहा होला । किनभने भारतमा नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउन गरेको आन्दोलनबारे एकीकृत खोज अनुसन्धान खासै भएको छैन र यसबारे पुस्तकहरु पनि लेखिएका छैनन् । त्यति कठिन र गौरवमय सङ्घर्षको इतिहास श्रुतिकै आधारमा रहेको थियो ।
यसैलाई बुझेर कालेबुङका शिक्षक सुवास सोताङले भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीअन्तर्गत नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउन गरिएको लामो सङ्घर्षबारे आफ्नो बुताले सकेसम्मको खोज अनुसन्धान गरी एउटा पुस्तक तयार पारेका छन्– ‘भाषा आन्दोलन इतिहास र उपलब्धि’ ।
लेखक सोताङले भाषा आन्दोलनका प्रमुख व्यक्ति, सङ्घसंस्था, राजनीतिक पार्टी, पत्रपत्रिका र लेखक कलाकारहरुले के–कस्तो र कसरी योगदान गरेका थिए गहन खोजी गरी पुस्तकमा समेट्ने प्रयत्न गरेका छन् । लेखकले ३७ वर्षे भाषा आन्दोलनका स्वरुप, स्थानहरु, गरिएका कार्यक्रमहरु, भाषा आन्दोलनको महत्व, उपलब्धि र कार्यान्वनयको अवस्थाबारे पनि विस्तृत रुपमा पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
पुस्तकमा आन्दोलन किन र कसरी भयो ? कहाँ–कहाँ मुख्य आन्दोलन भए, मुख्य व्यक्तिहरुको के–कस्तो योगदान रह्यो । पहिले कसरी नेपाली भाषालाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठयो र आन्दोलन कसरी सुरु भयो भन्नेबारे पुस्तकमा सप्रमाण उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपाली भाषाले भारतीय संविधानमा संवैधाकि हक सुनिश्चित गरेपछि उपलब्धि के भयो र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे पनि लेखकले पुस्तकमा चर्चा गरेका छन् ।
पत्रकारितामा समेत संलग्न रहिसकेका लेखक सुवासले भारतको देहरादुन, दार्जिलिङ, सिक्किम, कालेबुङ, खर्साङ, सिलिगुडी, डुवर्सलगायतका क्षेत्रमा भएका भाषा आन्दोलनबारे चर्चा गरेका छन् । यसैगरी उनले भाषा आन्दोलनको पृष्ठभूमि, इतिहास र उपलब्धिबारे पनि पुस्तकमा विस्तृत रुपमा खुलाएका छन् ।
लेखकले भारतमा नेपाली भाषाको आन्दोलनलाई प्रथम महाभारत भनेका छन् । यसैगरी नेपाली भाषा आन्दोलनलाई दबाउन को–को र कसरी लागिपरेका थिए र नेपाली भाषालाई गोर्खा भाषा बनाउनुपर्छ भन्नेहरुले के–के काण्ड घटाएका थिए भन्ने घटनाहरु पनि पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । पुस्तकमा भाषा आन्दोलनमा सुदर्शन शर्मा, देवराम शर्मा र कृष्ण सुब्बाहरु कसरी सहिद भए र आनन्द सिंह थापा, रतनलाल ब्राह्मण, पारसमणी प्रधान, इन्द्रबहादुर राई, नरबहादुर भण्डारी, दिलकुमारी भण्डारी, प्रेमकुमार आले, सीके श्रेष्ठ आरबी राई, मायादेवी क्षेत्री, आनन्द पाठक, डा कुमार प्रधानहरुका व्यक्तिगत योगदानबारे पनि चर्चा गरिएको छ ।
सन १९५८ को १८ जनवरीमा देहरादुनबाट प्रकाशित जागृत गोर्खा नाम गरेको पत्रिकाकामा सम्पादक आनन्दसिंह थापाले मित्रहरु नरेन्द्रसिंह राणा र वीरसिंह भण्डारीसँग मिलेर तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादलाई पत्र सम्प्रषित गरी चिठी लेखिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः भारतका नेपाली भाषीहरुले भाषा आन्दोलनलाई चर्काउँदै लगेका थिए । राजनीतिक र नागरिक समर्थन जुटाउँदै लगेका थिए ।
स्थानीय भूगोलदेखि राजधानी दिल्लीमा धर्ना दिएर आन्दोलन चर्काएपछि बल्ल सन् १९९१ मा नेपाल भाषाले संविधानमा आठौँ अनुसूचीमा सूचीकृत भएको थियो । तर यति धेरै कठिन सङ्घर्षबाट उपलब्धि प्राप्त भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन भने नेपाली भाषी भारतीयहरु अझै चुकिरहेको गुनासो लेखकको छ । नेपाली भाषा आन्दोलनमा संवैधानिक बनाउन पहल गर्ने भारतको सिक्मि राज्य सरकारले पनि नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउन कन्जुस्याइँ गरिरहेको चित्त दुखाइ पनि लेखकले गरेका छन् । संवैधानिक हक अनुसार व्यावहारिक कार्यान्वन गराउन लागिपरे भारतमा नेपाली भाषाको महत्व अझै बढ्ने लेखकको बुझाइ छ ।
भारतमा नेपाली भाषाको इतिहास जान्न र संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि भएका सङ्घर्ष र आन्दोलनबारे बुझ्न पुस्तक प्रभावकारी छ । लेखकको भनाइ अनुसार हालसम्म भारतीय भाषा आन्दोलनको सङ्घर्षबारे वितृत खोजगरी लेखिएको यो पहिलो पुस्तक पनि हो । सरल भाषामा लेखिएको यो पुस्तकम अझै खोज अनुसन्धान अपुरो जस्तो लागे पनि पुस्तक चाहिँ सङ्ग्रहणीय रहेको छ । पुस्तकका प्रकाशक दक्षिण सिक्किमका केवलप्रसाद शर्मा हुन् ।